Ọnọdụ mmepe na atụmanya ngwa nke ngwa elektrọnik smart
Igwe eji arụ ọrụ elektrọnik, ọkachasị akwa akwa nwere akwa, nwere njirimara nke ịdị nfe na ịdị nro, ezigbo nkasi obi, ntụgharị ike dị mma na arụmọrụ nchekwa, yana njikọta dị elu. Ha egosila ọtụtụ ohere ọhụrụ na nnukwu ngwa nwere ike na ngalaba dị iche iche maka ...
Ngwọta maka iri eriri na -adịghị ahụkebe na Spandex Jersey Fabric Curling
Kedu otu esi edozi nsogbu nke iri eriri na -adịghị ahụkebe na ntụgharị ihu nke agịga ịkpa akwa na mmepụta nke ajị anụ jacquard? N'ime igwe mkpuchi okirikiri jacquard, mgbe agịchara agịga ahụ were were eriri ahụ, enwere “eriri eriri” fọdụụrụ na t ...
N'oge na-adịbeghị anya, n'ihi mmụba nke ikpe Covid-19 enwetara na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia dịka Vietnam, ụlọ ọrụ na-emepụta ihe nwere ike ịlaghachi China na obere oge. A na -egosipụta ụfọdụ ihe ịtụnanya na azụmaahịa, yana eziokwu na nrụpụta alaghachila. Nnyocha e mere na nso nso a nke Ministri Azụmaahịa na -egosi na ihe dịka 4 ...
Nkwurịta okwu abụghịzi ọrụ “dị nro”. Nkwurịta okwu nwere ike melite arụmọrụ ụlọ ọrụ ma kwalite ọganiihu azụmaahịa. Kedu otu anyị ga -esi guzobe nkwukọrịta dị mma na njikwa mgbanwe? Isi: Ịghọta omenala na akparamma Ebumnuche nke nkwukọrịta dị mma na ...
Ngwa ahịa mbupu butere omume a ma wusie ike, na Orient Overseas International na -ebili 3.66%, na Mbupu Pacific bilitere karịa 3%. Dị ka Reuters si kwuo, n'ihi mmụba na -aga n'ihu nke iwu ndị na -ere ahịa tupu ọbịbịa nke oge ịzụ ahịa US, na -abawanye nrụgide na ngwaahịa ...
Ihe na -akpata akara nkwụsị na akwa ịkpa akwa okirikiri
N'ime usoro ịkpa ihe nke igwe okirikiri okirikiri, mgbe igwe bidoro wee kwụsị, mgbe ụfọdụ a ga -emepụta okirikiri akara kwụ ọtọ n'elu akwa, nke a na -akpọkarị akara nkwụsị. Ihe omume nke akara mgbada nwere njikọ na ihe ndị a: 1) Enwere g ...
Data mbupụ akwa na uwe nke China wepụtara na ọkara mbụ nke afọ
Dị ka data nke Nchịkwa Ọha Nchịkwa Ọha wepụtara na Julaị 13, mbupụ akwa na akwa nke China nọgidere na -eto eto na ọkara mbụ nke afọ. N'ihe banyere RMB na dollar US, ha mụbara site na 3.3% na 11.9% n'otu n'otu n'otu oge afọ gara aga, na ...
Nnyocha ihe chọrọ mma na nsogbu ndị a na -ejikarị agịga okirikiri (2)
5) Yiri n'akụkụ ire na ngaji (A) A na -eji nkọwa na ụdị nke agịga na -akpa ihe n'ụzọ na -ekwesịghị ekwesị, na ọkpụrụkpụ dịkwa oke oke. (B). Ọnọdụ ọnọdụ nke agịga dị elu na nke ala adịghị mma; ọ bụrụ na ọ bụ otu igwe jersey, ọ ga -ekwe omume na sink ...
Nnyocha ihe chọrọ mma na nsogbu ndị a na -ejikarị agịga okirikiri (1)
1. Ihe achọrọ dị mkpa nke agịga okirikiri okirikiri 1) Agbanyere agịga ịkpa ihe. (A) Ndozi nke ihu na azụ na aka ekpe na aka nri nke agịga ahụ n'akụkụ akụkụ agịga (B) ịdị n'otu nke nha nko (C) ịdị na -anya nke anya site na stitch t ...
Ebe na -ekpo ọkụ 丨 Oké ifufe niile! Akụrụngwa na -agba ara, ọnụ ahịa ụlọ ọrụ 'na -agbanwe kwa ụbọchị', oge nrụpụta kacha elu na -abịa?
2021 ka bụ ihe pụrụ iche maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, n'ihi na kemgbe mbido afọ a, ọtụtụ ngwa ahịa ebutela mmụba ọnụ ahịa. Ọ dị ka, ewezuga ọnụ ahịa anụ ezi, nke na -ada ada, ọnụahịa nke ngwa ahịa ndị ọzọ na -arị elu. Gụnyere ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị, akwụkwọ mposi, aquati ...
Ụdị ịkpa oke m na -egbukepụ egbukepụ! Ka ị bụrụ nwata kacha maa mma n'okporo ụzọ a!
Ụdị ịkpa ihe na-adọrọ anya na-ejikọta ihe mejupụtara, agba na udidi n'otu ebe, na-egosipụta nka na ịma mma nke onye nrụpụta. A na-enweta mmetụta na-adọrọ anya site na mpaghara mpaghara buru ibu yana ọdịiche agba doro anya, na-egosipụta njirimara avant-garde. Ugbu a g ...
UPF215BC seramiiki kewara onye na -eri ihe
site na nchịkwa na 21-06-14
Okwu Mmalite Nhọrọ nke ihe seramiiki dị elu yana iji teknụzụ nrụpụta dị elu na teknụzụ na-enyere UPF215BC yarn feeder aka ịrụ ọrụ dị mma dị ka nkenke dị elu na ezigbo nguzogide, nke nwere ike mezuo ihe achọrọ maka imecha elu na w .. .